Real Madrid oo qorsheeneysa in Afar ciyaaryahan ay miiska u saarto Liverpool si ay kaga soo qaadato xiddig muhiim ah - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 18 Nof 2019. Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay la soo saxiixato mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda Liverpool xilli ciyaareedka soo socda.
Saraakiisha kooxda Los Blancos ayaa waxay si xoogan u xiiseenayaan saxiixa daafaca reer Holland iyo naadiga Liverpool ee Virgil van Dijk, iyagoo ka war qaba in arrintaas aysan sahlanaan doonin.
Reds ayaan ogolaan doonin in si sahlan ay ku fasaxdo daafacooda Virgil van Dijk, taasoo ay kooxda Real Madrid si fiican uga war qabto.
Sidaas darteed, Los Blancos ayaa waxay qorsheeneysaa inay ku soo jiidato saraakiisha garoonka Anfield dalab lacageed aad u xoogan, si ay ula soo saxiixdaan 28 jirka reer Holland.
Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa qorsheynaya inuu wadahadalo la bilaabo Liverpool, si uu Virgil van Dijk ugu soo qaato qiimo dhan 120 milyan euro, inkastoo da’adiisa ay sii weynaaneyso.
Intaas kaddib, Florentino Perez ayaa wuxuu qorsheeneyaa in heshiiskan uu qeyb kaga dhigo midkood afarta ciyaaryahan ee kala ah Isco, Gareth Bale, Marco Asensio iyo Luka Modrić, si ay ugu fududaan wadahadalada.
Yeelkeede, qandaraaska Virgil van Dijk ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu gaarayaa ilaa iyo 2023, Klopp ayaana u arka inuu yahay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee Reds, tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Southampton.
Salah, Mbappe & Haaland oo hoggaaminaya Kooxdii ugu fiicnayd heerka Guruubyada UEFA Champions League, xilli Messi iyo Ronaldo ay ka maqan yihiin